HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 Kocaeliရထားပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာအင်စတီကျု Gebze ၌တည်လိမ့်ရန်
21 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာ gebzed အစပြုမှတည်လိမ့်မည်
စက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Mustafa Varank, ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Cahit Turhan လည်းတူရကီသိပ္ပံနှင့်တူရကီ၏နည်းပညာတက္ကသိုလ်သုတေသနကောင်စီတူရကီ (TUBITAK) နှင့် "ပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာ၏မီးရထားဌာန Institute" တည်ထောင်ဘို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု protocol ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားအတွက်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) ၏သမ္မတနိုင်ငံ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူထွက်သယ်ဆောင်ကြောင်း သူ၏မိန့်ခွန်းထဲတွင်သူသည် protocol ၏လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
"ကျနော်တို့က CAPTURE ၏ရထားပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ Technological လွတ်လပ်ရေးမှာရည်ရွယ်ထားသည်"
ဝန်ကြီးဌာန, 11 အဖြစ်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း 2023 စက်မှုလက်မှုနှင့်နည်းပညာ၏မူဘောင်အတွင်းကိုပြင်ဆင်, သူတို့ကတဖန်, နည်းပညာ-မောင်းနှင်စက်မှုလုပ်ငန်းရထားလမ်းစနစ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုရွှေ့ ", ထိုရထားလမ်းလွှဲပြောင်း Varank အတွက်မဟာဗျူဟာ၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေးကျနော်တို့စာရင်းရရှိထား '' မူလတန်းထုတ်ကုန်အုပ်စုတစ်စု၏ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုအားပေးခဲ့တယ်ပါလိမ့်မည် '' ။ အခြေခံအဆောက်အဦများအပါအဝင်ဒီကဏ္ဍအတွက်လာမယ့်နှစ်ထဲမှာပို့ဆောင်ရေး 15 ဝန်ကြီးဌာန, 70 ဘီလီယံယူရိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးရထားလမ်းစနစ်၏အရင်းအမြစ်များကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လောက်တစ်ဦးတည်းတောင်မှဒီငွေပမာဏကြောင့်အရေးပါကျွန်တော်တို့ကိုပြသသည်။ "ဟု၎င်းကပြောသည်။
Varank, ကအရေးပါသောခြေလှမ်း "တူရကီ, အသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာလွတ်လပ်ရေးရထားလမ်းဖမ်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကြောင်းသတိပြု, နည်းပညာဆိုင်ရာလွတ်လပ်ရေး၏ဖမ်းကိုယ်စား protocol ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ protocol ကိုယနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးပါလိမ့်မည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏လွတ်လပ်ရေးမှဦးဆောင်လမ်းတခုတခုအပေါ်မှာအရေးကြီးသောမှတ်တိုင်ရှိလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကား protocols များ TUBITAK နှင့် TCDD နှင့်အတူပူးပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့်မသာပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ပံ့ပိုးမှုများဖြင့်အသုံးပြုသူကျနော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးကြောင်းနည်းပညာတင်ပို့သည့်တူရကီဖြစ်ချင်တယ်။ "သူကဆိုသည်။
"TUBITAK ကဆောင်ရွက်ရ R & D စီမံကိန်းများ,"
ဒီ Varank ကမ္ဘာကြီးအတွက်အောင်မြင်သောဥပမာဆန်းစစ်ရှင်းပြသူကဆက်လက်: "ကျနော်တို့အမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းများ၏ကစားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အောင်မြင်မှုများအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းမြင်ကြပြီ။ ထို့ကြောင့်, စက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနှင့်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအလားတူပုံစံဒီဇိုင်းနေကြသည်။ ပထမဦးဆုံးဌာန၌ရထားပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာအင်စတီကျု, 100 စွမ်းအင်အင်စတီကျုအကြောင်းကို Gebze အတွက် TUBITAK Marmara သုတေသနစင်တာမှကျွမ်းကျင်သူထူထောင်လျက်ရှိသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် TCDD တူရကီအတွက်ကိုလည်းပြုရမည်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျနော်တို့အရေအတွက်ကို 500 R & D ကိုဝန်ထမ်းရောက်ရှိဖို့မျှော်လင့်ထား။ ထို့ကြောင့်အရည်အချင်းပြည့်သုတေသီများကဆောင်ရွက်ရမည့် R & D စီမံကိန်းများ, TUBITAK employ ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အင်စတီကျု၏အကြံပေးအဖွဲ့ပျဉ်ပြား, TUBITAK နှင့် TCDD မှကိုယ်စားလှယ်များထားရှိရေးပါလိမ့်မယ်။ TCDD များ၏စွမ်းရည်များမြှင့်တင်ရန်ကအဖွဲ့အစည်းဝန်ထမ်းများ၏ပညာရေးဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးပါလိမ့်မယ်။ "
ဝန်ကြီးများ Varank, တူရကီရဲ့လိုအပ်ရထားလမ်းနည်းပညာဌာန၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူပထမဦးဆုံးသောဤဌာနနှင့်အတူနည်းပညာလွှဲပြောင်းသဘောတူညီချက်များလုပ်ဆောင်သွားရန်, ဒေသခံနှင့်အမျိုးသားပြန်လည်အရင်းအမြစ်များကိုနှင့်အတူဒီဇိုင်းနှင့်လည်းအနာဂတ်ရထားလမ်းနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဒီနေရာမှာပြောကြလိမ့်မည်။
ရည်ရွယ်ချက်များလက်တွေ့ကျကျ Varank ထွက်သတ်မှတ်ထားကြောင်းမှုကိုအလေးအနက်, "ငါအထူးသကြောင်းအလေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငါသည်ဤရည်ရွယ်ချက်များကိုဖော်ပြဘယ်တော့မှစိတ်ကူးမရနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့နှင့်ဆန်းသစ်လုပ်ငန်းရှင်များရှိသည်, မြင်သာထင်သာထုတ်ကုန်သို့ရှိသူများရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အဖြစ်ပြောင်းလဲမယ်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဇွန်လ 2018 အတွက်တူရကီကုမ္ပဏီအတွက်ထုတ်လုပ်ခဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမြေအောက်ကားများတင်ပို့ကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့ကဒီအဖွဲ့အစည်း, မဟာဗျူဟာမြောက်လမ်းညွန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်များဆင်တူစေမည်သူတို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ "ဝမ်ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
ပြည်တွင်းနှင့် NATIONAL အရင်းအမြစ်များ
အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Cahit Turhan, အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲ၏သမိုင်းအတွက် TCDD ၏လယ်ပြင်တွင် TUBITAK ရဲ့သီအိုရီဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံကြီးမားတဲ့စွမ်းအင်ကိုဖန်တီးလိမ့်မယ် "ဟုဤရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး၏လိုအပ်ချက်၌ရှိကြ၏တွန်းအားပေးသည်။ ရထားလမ်းကားကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ရဲ့ရထားလမ်းစုစုပေါင်းလမ်းကြောင်းအရှည်နှင့်အရေအတွက်ကအလျင်အမြန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်တိုးနှင့်အတူတိုးပွားလာသည်ကို ထောက်. ။ ဤသည်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတညီတညွတ်တည်းကျနော်တို့ကဒေသခံများနှင့်အမျိုးသားရေးအရင်းအမြစ်များကိုလိုအပ်သောထုတ်ကုန်များတိုးနှင့်အတူ ပို. ပို. အရေးပါနှင့်မဟာဗျူဟာဖြစ်လာခဲ့သည်။ "သူကဆိုသည်။
ဦးဆောင်နည်းပညာ FROM မှတင်ပို့ COUNTRIES မှ
Turhan အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအဆောက်အဖော်ပြကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တင်ပို့နိုင်ငံများအတွက်ဦးဆောင်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် "TCDD နှင့် TUBITAK ၏ Institute မှအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, အဖွဲ့အစည်းကနည်းပညာလွှဲပြောင်းသဘောတူညီချက်များထွက်သယ်ဆောင်မည်, အဓိကအားဖြင့်ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာရဲ့ရထားလမ်းနည်းပညာအားဖြင့်လိုအပ်အမျိုးသားရေးနှင့်ဒေသခံအဆောက်အဦနှင့်အတူဒီဇိုင်းပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံ၏လက်ရှိနည်းပညာစွမ်းရည်တိုးမြှင့်ပြီးနောက်, အနာဂတ်များ၏ရထားလမ်းနည်းပညာတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းန်ထမ်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ မျှော်လင့်, အမျိုးသားလျှပ်စစ်ရထားသတ်မှတ်မည်မစ်ရှင်၏ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အောင်မြင်ဖို့ပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်နေ့ရည်မှန်းချက်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားစုံ၏ထုတ်လုပ်မှုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အလွန်စိတ်အားထက်သန်မှာနေထိုင်လိမ့်မည်ဟုအပြည့်အဝယုံကြည်မှုသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်။ "သူကဆိုသည်။
အဆိုပါမိန့်ခွန်းအပြီးအခြားတစ်ဖက်, TUBITAK ပါမောက္ခ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတတွင် ဒေါက်တာ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan Hasan Mandal နှင့်သင့်လျော်သော, "Institute ကရထား၏ပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာ" ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတည်ထောင်ခြင်းအပေါ် protocol ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အောက်ပါတစ်ဦးအမှတ်တရပစ္စည်းဓာတ်ပုံကို၏လက်မှတ်ကိုယူခဲ့ပါတယ်။ (စက်မှုနှင့်နည်းပညာ TC န်ကြီးဌာန)
ပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာများအတွက် ESO 2012 InnoTrans အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် 13 / 09 / 2012 Eskişehirမီးရထား 18-21 စက်တင်ဘာလ 2012 အတွက်အဖွဲ့အစည်းများအကြားစနစ်များ Cluster, စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များEskişehirကုန်သည်ကြီးများအသင်း (ESO) ဘာလင်, ဂျာမနီတှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည် "InnoTrans 2012 နိုင်ငံတကာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာတရားမျှတသော" 40 စရိုက်အသင်းကိုအစီရင်ခံတင်ပြ join ပါလိမ့်မယ်။ အဆင်းလှသောTÜLOMSAŞ Inc ကိုမှ eso နောက်တစ်နေ့ eso ထံမှစာဖြင့်ရေးသားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အတွက် နှင့် Savronik Inc က ထို့အပြင် "သီးခြားပြပွဲရပ်တည်ချက်တက်ရောက်ရန်ယင်း၏အဖွဲ့ဝင်များ၏မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်အဖြစ်ကိုလည်းအနေအထားမှာဒီပြပွဲအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်း၏အနာဂတ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှတံ့သောရထားလမ်းကဏ္ဍ၏ Eskisehir အရေးအပါဆုံးဝိုင်း၏တဦးတည်းကိုညွှန်းထားပါသည်ကုမ္ပဏီများ, တစ်ဦးကော့တေး ESO အားဖြင့်ကဏ္ဍတွင်နိုင်ငံခြားသင်တန်းသားများအပါအဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှပေးထားပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်အဆင်းလှသောကာလအတွင်း ဘာလင်ရထား ...
transistor 2014 xnumx.uluslarara သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာစာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့်ပြပွဲ 02 / 12 / 2014 transistor 2014 xnumx.uluslarara သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာညီလာခံနှင့်ပြပွဲ: မြို့ပြအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှု IETT အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေး, အလယ်ဗဟိုတွင်ယခုအချိန်အထိတူရကီအတွက်တန်ဖိုးစတင်ဖွဲ့စည်း '' လူ့ '' အများအပြားပထမခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ သူတို့ကအတူတကွသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင်အာဏာပိုင်များ, အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုယ်စားလှယ်များထံသို့ဆောင်ခဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်မျှဝေဖို့အိုင်ဒီယာတစ်ခုပလက်ဖောင်း transistors ယခုနှစ်ရဲ့စာတမ်းဖတ်ပွဲ, ပြပွဲ, အလုပ်ရုံ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများ7- 19 ဒီဇင်ဘာလဒီဇင်ဘာလ 20 နေ့စွဲအပေါ်အစ္စတန်ဘူလ်ကွန်ဂရက်စင်တာမှာကျင်းပပါလိမ့်မည်။ transistor "ဟုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင်အချက်အလက်များ၏ခွဲဝေမှုသေချာစေရန်" 2014 xnumx.uluslarara သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာစာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့်ပြပွဲ "နည်းပညာနှင့် ...
transistor 2014 နိုင်ငံတကာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာစာတမ်းဖတ်ပွဲသောကြာနေ့စတင် 17 / 12 / 2014 transistor 2014 နိုင်ငံတကာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာစာတမ်းဖတ်ပွဲသောကြာနေ့စတင်မ: transistor 2014 နိုင်ငံတကာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာစာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့်ပြပွဲ "အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 4S အတွက်: စမတ် (ထောက်လှမ်းရေး), အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး (လုံခြုံရေး), Simplicity (လွယ်ကူခြင်း), ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားမပျက်စီး (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားမပျက်စီး); အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်နှင့် IETT -19 ဒီဇင်ဘာလ 20 2014 နှင့် ပူးပေါင်း. ကအစ္စတန်ဘူလ်ကွန်ဂရက်စင်တာမှာကျင်းပပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်၏အဖွင့်ဖို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Lutfi Elvan, အစ္စတန်ဘူလ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Vasip Sahin, အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Kadir ကိုယျတျော၏အထွေထွေမန်နေဂျာ Temel Kotil, TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာSüleyman Karaman, ပို့ဆောင်ရေး, Inc မှ General Manager ဖြစ်သူ Omar ကြယ်များကဲ့သို့အမည်များ၌ဟောပြောဖို့စာတမ်းဖတ်ပွဲတက်ရောက်ခြင်းသူတွေထဲမှာ ...
ပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာအပေါ် transistor 2015 နိုင်ငံတကာစာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့်ပြပွဲ 14 / 12 / 2015 transistor 2015 နိုင်ငံတကာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာစာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့်ပြပွဲ: transistors နိုင်ငံတကာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာစာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့်ပြပွဲကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်အားလုံးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများသမာဓိတစ်ဘုံဘာသာစကားနှင့်နားလည်မှုအတွက်တဦးတည်းအိမ်ခေါင်မိုးအောက်မှာပေါင်းစပ်ပြီးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက်စည်းရုံးနေကြတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ 8 ။ အဆိုပါကို transistor သောင်းချီသင်တန်းသားများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ယနေ့တိုင်အောင်အထွက်သယ်ဆောင်ခံရဖို့ရှိသည်တည်ခင်းဧည်သိရသည်။ နှစ်စဉ်ကျင်းပသည့်စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာကွဲပြားခြားနားသောဆောင်ပုဒ်, လယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်သူပီရာပေါင်းများစွာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ transistor 2015, 8 ။ နိုင်ငံတကာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာစာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့်ပြပွဲ "ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် 4P: စီစဉ် (စီမံကိန်း), ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား (ကုန်ထုတ်စွမ်းအား), ကားရပ်ရန် (Parklake Up ကို), paratransit (Alternative အလယ်အလတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး mode)" အစ္စတန်ဘူလ်၏ဆောင်ပုဒ်နှင့်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ကဦးဆောင် ...
ပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာများအတွက် ESO 2012 InnoTrans အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်
transistor 2014 xnumx.uluslarara သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာစာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့်ပြပွဲ
ပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာအပေါ် transistor 2015 နိုင်ငံတကာစာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့်ပြပွဲ
transistor 2015 8 ။ ပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာ Start ကို (ဗီဒီယို) အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲ
ရထားလမ်းဖြစ်ရပ်များ: 26 ။ ray Technologies ကနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးအိန္ဒိယလေတပ် 2013 - ရောဂါ
စနစ်များနည်းပညာ xnumx.rayl အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (ဓာတ်ပုံပြခန်း) စတင်